AirPods Pro ichiri kutengeswa, asi ikozvino AirPods 2 dzadzoka pamutengo wakaderera - BGR - Tamban RELAY
Amazon Smart plug Deal inobatanidza nese nhare dzako dzekupusa ku ...
Maitiro ekuwedzera mhedzisiro paAmazon ne…
Amazon ine 4 inoshamisa pari pani inobata, pamwe ne15…
maapuro AirPods Pro Ruzha runodzima mahedhifoni parizvino haasipo muAmazon, asi vaverengi vedu vakaraira mazana acho, sezvo ari mutengo wakaderera pasati pazororo rekupedzisira. Pamusoro pezvo, munhu wese anoziva kuti Amazon inogara ichikurumidza kutumira kunze kwezvinhu zvekutengesa, uye takaudzwa kuti vanhu vakagamuchira yavo AirPods Pro muvhiki kana maviri kekupedzisira nguva yavakatengeswa kunze. Heck, isu takachaira edu apo kuendesa kweAmazon kwakaratidza mwedzi ye1 uye zvakangotora mazuva mashanu kugamuchira iwo.
Iwe unogona zvakare kuraira AirPods Pro ikozvino kana iwe uchida, uye iwe unofanirwa kuva navo nekukurumidza nekukurumidza. Asi kana iwe uchida kushandisa yakawanda mari shoma uye kutumira yako odhi ipapo, Apple AirPods 2 achangodonha odzokera ku $ 129, iri mutengo wakaderera wakamboitika weApple yechipiri AirPods. Iwe unogona zvakare kutora 2 AirPods ine waya isina waya yekuchaja ye $ 164,99 nhasi, iyo ingori chete madhora mashanu kumusoro kwavo-nguva dzese.
Heano mamwe akakosha ruzivo nezve AirPods:
Iye zvino, neyakawanda nguva yekutaura, izwi-rakagadziriswa Siri kuwana - uye idzva isina waya yekuchaja bhokisi - iyo AirPods inounza isina waya isina waya yemusoro. Ingo bvisa ivo uye ivo vagadzirira kushandisa nemidziyo yako yese. Zviise munzeve dzako uye zvinobva zvabatana nekukasira, zvichinyudza iwe mune yakapfuma, yepamusoro-soro kurira. Semashiripiti.
Mushure mekugadzika-nyoro-bhatani kugadzirwa, iyo AirPods inovhurwa otomatiki uye inogara yakabatana. Kushandisa kwavo kwakangoreruka. Ivo vanonzwa pavanenge vari munzeve dzako uye imbomira kana iwe uchivabudisira kunze. Uye iyo AirPods chiitiko chakangoita sechinoshamisa, kana iwe uchichiishandisa ne iPhone yako, Apple Watch, iPad, kana Mac.
Unoda ruoko runobatsira here? Ingo taura "Hei Siri" yekubatsira pasina kutsvaga yako iPhone. Uye neMharidzo Dziziviso, Siri inogona kungoerekana yataura mameseji ako anouya nekukurumidza pavanosvika. Unogona kusarudza kuti ndeapi avanonzwa kubva kwavari, uye Siri haazokuvhiringidzi kana iwe uri parunhare kana kugovera rwiyo.
Yakasimba neApple H1 headset chip, iyo AirPods inopa kukurumidza uye yakagadzika isina wireless kubatana kune zvishandiso zvako - kusvika ku2x nekukurumidza kana uchichinja pakati pekushandisa zvinoshanda, uye 1,5 nguva nekukurumidza kubatana nguva. zvekufona. Iyo H1 chip zvakare inobata izwi-yakagadziriswa Siri kupinda uye inopa kusvika 30% yakaderera yemitambo latency. Kunyangwe iwe uri kutamba mitambo, kuteerera mimhanzi, kana kunakidzwa nemakora podcasts, unonakidzwa kurira kwakanaka.
Iine nyaya itsva yekushaja isina waya, kubhadharisa kuri nyore sekuisa kesi yePairPods pane Qi yakasimbiswa kuchaja pad. Ndizvozvo. Iyo chiratidzo che LED kumberi kwemhosva inokuzivisa iwe kuti ma AirPod ako ari kubhadharisa. Uye kana iwe uri kure nemubhadharo wechaja, unogona kushandisa Lightning port kuti ubhadhare.
Uye imwe ruzivo nezve AirPods Pro:
Active ruzha cancellation kune inonyudza ruzha
Transparency maitiro kuti unzwe uye ubatane nenyika yakatenderedza iwe
Zvitatu saizi dzakapfava, tapered silicone matipi ezvibodzwa zvakakodzera
Shamba uye mvura inodzivirira
Adaptive EQ inongoerekana yagadziridza mimhanzi chimiro chezeve yako
Kushandura kwakajeka kwemajeri ako ese Apple
Kutsvaga nokukurumidza kuSiri kunoti "Hey Siri"
Wireless wayajaja kesi inopa anopfuura maawa makumi maviri nemana ehupenyu hwebheti
Mufananidzo Unobva: Marcio Jose Sanchez / AP / Shutterstock
Amazon Smart plug Deal inobatanidza nese nhare dzako dzekupusa pane isingasviki $ 5 imwe ne…
Maitiro ekuwedzera mhedzisiro paAmazon ine iyo Amazon Bhizinesi account…
Amazon ine mana anoshamisa epapo pani inobata, pamwe negumi nemashanu makuru accessories ...
Yakanyura yakadzika mune yedu sarudzo dzakanakisa kusvika zvino - BGR